Sida loo diyaariyo goob loogu talagalay raadinta mashiinka raadinta?
Bal qiyaas xaaladdaada aad ku turjuntay riyadaada dhabta ah waxayna bilowday boggaaga gaarka ah. Hadda, waa wakhti lagu wanaajinayo joogitaankaaga joogitaankaaga iyo inaad soo jiidato macaamiishaada mustaqbalka cusub. Dabcan, dallacaadda boggaaga lama samayn karo maalin maalmaha ka mid ah sida ay u qaadato wakhti wakhti aad raadinayso guurtida raadinta si aad u muujiso domainkaaga. Si kastaba ha ahaatee, waxaa laga yaabaa inaad saameyn ku yeelatid geeddi-socodka ku-shaqeysiinta mashiinka raadinta. Sida SEO waa nidaam waqti-qaadashada, ma heli doontaa natiijooyin deg deg ah. Si kastaba ha noqotee, hagaajinta ugu fiicnaanta ee aad sameysey ka dib markii aad soo dirtay shabakadda internetka waxay saameyn weyn ku yeelan kartaa kartida ganacsigaaga internetka. Tusaale ahaan, doorashada saxda ah ee saxda ah waxay saameyn weyn ku leedahay joogitaankaaga internetka mustaqbalka maaddaama macaamiishaadu ay ka heli doonto boggaaga shuruudahan raadinta. Waxaad u baahan tahay inaad abuurto olole wanaagsan oo wanaajin hal mar si aad mustaqbalka u badbaadiso mustaqbalka oo aad u yareyso baahida loo qabo in la xaliyo khaladaadka bogga.
Tilmaamahan, waxaad helli doontaa talooyin ku saabsan milkiilayaasha goobta oo kaliya oo bilaabay ilaha webka. Talooyinka soo socda ayaa kaa caawin doona inaad sameysid qorshe wanaagsan oo farsameynta raadinta wanaagsan mar kasta oo aad bilowdo bog cusub si aad u hubiso in ay ka soo bilowday billowgii hore si loo soo jiito taraafikada tayada qalabka raadinta.
Sidee baan SEO ugu sahlan karaa website-ka cusub?
Waxaad ubaahan tahay inaad sameysid website-kaaga ereyada muhiimka ah si loo hagaajiyo qiimeynta. Bog kasta oo ka mid ah boggagaaga waa inuu bartilmaameed u dhigaa qadiyaddiisa gaarka ah ee muhiimka ah, ereyada muhiimka ah ee loo yaqaan 'keywords' si ay uga caawiso xarigaha raadinta inay kala saaraan content. Waxaad u baahan tahay inaad jajabiso qaabka boggaaga dhawr qaybood oo kala duwan. Nooc kasta waa in loogu talagalay erey kale oo raadin ah si kor loogu qaado fursadda aad ku geli karto TOP Google su'aalooyin kala duwan. Dhisidda websaydu waxay leedahay faa'iidooyin badan. Ugu horreyntii, waxay abuurtaa mawduuc cad oo go'an raadinta bartilmaameed kasta boggeeda, halkii laga heli lahaa bogga ugu muhiimsan ee loogu talagalay keywords keywords. Nidaamkan noocan ah wuxuu bixiyaa bogga ugu sareeya ee ku haboon.
Isticmaalka nuxurka user-friendly
Hadda, waxyaabaha ku habboon iyo tayada waxay u adeegaan sida saameyn ku leh Google Google. Jiilka ugu wanaagsan ee la jaanqaadayo waa qayb ka mid ah naqshadeynta goobta. Waxay micnaheedu tahay in milkiilayaasha bogagga si buuxda u xakameyn karaan qaybtan SEO. Marka, ka hor intaanad bilaabin dadaal SEO ah, ku hubso in waxyaabaha aad si fiican u qaabeysan oo ku habboon suuqa iyo aad u xiiseyneyso. Waxaa intaa dheer, waxaad u baahan tahay inaad ku darto ereyada muhiimka ah ee ku jira mawduucaaga si aad u aragto baaritaanka bots. Waxaan kugula talineynaa inaad miisaanka ugu badan iyo gaadiidka-gaarsiiso ereyada muhiimka ah ee cinwaannada iyo bilowga cutubka. Waxaa intaa dheer, waxaad u isticmaali kartaa sharaxaada iyo ALTs. Marka la eego cilmi-baarisyo dhowaan, Google waxay sare udhigi doontaa bogagga ku jira in ka badan 2,000 oo ereyo ah markaa bogagga leh nuxur gaaban oo iftiiminaya maaddaama aysan caadi ahaan u qaadin wax faa'iido leh dadka isticmaala celceliska. 'macluumaadka. Taasina waa sababta aan ugu talagalay qoraallo 2-3 bog oo dheer oo leh qaabab adag, tusaale ahaan, hagayaal tallaabo tallaabo ah, tabobarno ama talooyin. Cilmi-baaristu waxay sidoo kale muujinaysaa, in waxyaabaha dheeraadka ah iyo kuwa dhexdhexaadka ah ay aad ugu dhow yihiin inay xiriirro ka helaan qoraallada gaaban. Ugu dambeyntii, waxay kaa caawin doontaa inaad dhisayso tiro badan oo xiriir ah oo ku yaala bog kasta Source .